အခ်စ္ေရး Archives - SANTHITSA
နှစ်ပေါင်း (၅၀) ကျော် ကွဲကွာ သွားတဲ့ ချစ်သူ ရှိတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို ၅ နှစ် တခါ လာရှာခဲ့တဲ့ ဂျပန် အဘိုးအို
နှစ်ပေါင်း (၅၀) ကျော် ကွဲကွာ သွားတဲ့ ချစ်သူ ရှိတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို ၅ နှစ် တခါ လာရှာခဲ့တဲ့ ဂျပန် အဘိုးအို အချစ်စစ် ဆိုတာ တကယ်ရှိကြောင်း သက်သေ ပြသွားတဲ့ သူတစ်ယောက်ကြောင်းကို ပရိသတ် ကြီးအတွက် ပြန်လည် မျှဝေ ပေးလိုက်ပါ တယ်နော်။ ဒီအဖြစ် အပျက်လေးကို ဂျပန် နိုင်ငံ မှာရှိတဲ့ မြန် မာကျောင်းသူ တစ်ယောက်က အခုလို ပြန်လည် မျှဝေ ပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဘိုးအသက် ၃၀ မှာ တခါ ၃၅ နှစ် မှာတခါ မြန် မာက သူ့ ကောင်မလေးကို …
မိန်းကလေးတွေ ရွဲ့ပြောတတ်တဲ့ အတည်စကားလေးတွေ
မိန်းကလေးတွေ ရွဲ့ပြောတတ်တဲ့ အတည်စကားလေးတွေ #လာမခေါ်နဲ့! အဲတာခေါ်ခိုင်းတာ မခေါ်ပဲနေကြည့် သေအောင် စိတ်ဆိုးတယ်… #အေးးး ရတယ်လေ! အဲတာ မရဘူးးး ကြည့်နေ ငါပြဿနာ ရှာပြမယ် အဲ့လို! #ပြီးတာပဲ! အဲ့တာ မပြီးဘူး မကျေနပ်လို့ ပြောတာ ခဏနေ သူပြန်ရွဲ့တော့မှာ! #ဘာတစ်ခွန်းမှ လာမပြောနဲ့! အဲ့တာကောက်သွားတာ အမြှုပ်ထွက်အောင် သွားရှင်းပြ ပြောနိုင်မှ တော်ကာကျမှာ! #ကြိုက်တာသာလုပ်! ဘာမှသွားမလုပ်နဲ့ အဲ့တာသူ ပြဿနာရှာဖို့ အဆင်သင့်ပဲ ဆိုတဲ့သဘော! #ငါ့ကို အဖက်လာမလုပ်နဲ့! ပစ်ထားတာ များသွားပီ သေချာပြန်ဂရုစိုက်ပေး ဆိုတဲ့သဘော အနီရောင်အဆင့် ရှော့ရှိတယ်! #နင်ဘာလုပ်လုပ် ငါဂရုမစိုက်ဘူး! အဲ့တာ သူဂရုစိုက်တယ် တော်တော်စိုက်တာ မျက်စိထောက်ထောက်ကြည့်နေတာ …
“ရာဇဝင်ထဲက အချစ် စကားလုံးများ”
“ရာဇဝင်ထဲက အချစ် စကားလုံးများ” (၁) “မမြဝင်းရယ်… လှေလံနှစ်ဖက် နင်းမယ်ဆိုလည်း ကျုပ်ဘက်ကို ပိုပိုသာသာလေး ဖိနင်းလိုက်စမ်းပါဗျာ..။ ” (ဗိုလ်အောင်ဒင်) (၂) “မယ်သီတာရယ် မင်းပုံရိပ်ကလေး မြင်ခဲ့ ကတည်းက စွဲလမ်း ခဲ့ရတာပါ..။ မင်းဘာသာ လင်ဘယ်နှယောက်ရဲ့ မယားဖြစ်နေနေ ငါ ဂရုမစိုက်ဘူး ။ ငါ လိုချင်တာ မင်းအချစ်ကိုပါ..။ သိပ်ချစ်လွန်းလို့ မင်း နှလုံးသားကို ရဖို့ ငါ အရူးတစ်ယောက်လို ကြိုးစားခဲ့တာ…ကြည့်ပါဦး..။ ငါ့ဆွေတွေ ၊ မျိုးတွေ အကုန်သေ.. ငါ့တိုင်းပြည်ကြီး မီးဟုန်းဟုန်း တောက်လောင်နေပြီ..၊ မင်းအချစ်ကို ရဖို့.. ငါသေပြဖို့ပဲ.. လိုတော့သလား..ဟင်။ ..” (ဒဿဂီရိ) (၃) ” …
အချစ်မှာ နစ်မြောသွားတဲ့အခါ ဒီလိုအမှားမျိုးတွေကို လုပ်မိတတ်ပါတယ် ..
အချစ်မှာ နစ်မြောသွားတဲ့အခါ ဒီလိုအမှားမျိုးတွေကို လုပ်မိတတ်ပါတယ် .. တစုံတယောက်ကို ရူးရူးမူးမူး ချစ်မိတဲ့အခါ လူတွေဟာ အမှားအမှန်ကို ခွဲခြား သိမြင်နိုင်စွမ်း မရှိတော့တဲ့အထိ ဖြစ်တတ်ပါတယ် … ။ အရမ်းကြီးလွန်းတဲ့ အမှားတွေကို လုပ်တာမျိုး မဟုတ်ပေမယ့် အချစ်တခုတည်း အတွက်နဲ့ တခြားသော တန်ဖိုးရှိတဲ့ အရာတွေကို လက်လွှတ်မိတတ်ကြပါတယ် … ။ ဒီအမှားတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော် …. ။ (၁) သူငယ်ချင်း အပေါင်းအသင်းတွေကို မေ့လျော့ကုန်တယ် ချစ်သူရည်းစား မရခင်တည်းက ကိုယ်နဲ့မခွဲ တတွဲတွဲ ရှိခဲ့တဲ့ အရင်းနှီးဆုံး သူငယ်ချင်းတွေကို ရည်းစားလည်းရရော လျစ်လျှူရှု မေ့လျော့ထားမိတတ်ကြပါတယ် … ။ ကိုယ့်ရည်းစားနဲ့ပဲ တချိန်လုံး …
“ကိုယ်ချစ်တဲ့သူကို အရာရာအလျှော့ပေးပြီး ပေးဆပ်နေလို့ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူက ကိုယ့်အပေါ်ပိုချစ်လာလိမ့်မယ်လို့ ထင်ရင် မှားသွားပါလိမ့်မယ်”
“ကိုယ်ချစ်တဲ့သူကို အရာရာအလျှော့ပေးပြီး ပေးဆပ်နေလို့ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူက ကိုယ့်အပေါ်ပိုချစ်လာလိမ့်မယ်လို့ ထင်ရင် မှားသွားပါလိမ့်မယ်” အချစ်ရေးမှာ အစစအရာရာ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် မျှမျှတတ ဖြစ်သင့်ပါတယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲ တစ်ယောက်ကပဲ အမြဲပေးဆပ်နေ ရတာက ဘယ်တော့မှ မဖြစ်သင့်တဲ့ အရာပါ။ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူ ကို အရာရာအလျှော့ပေးပြီး ပေးဆပ်နေလို့ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူက ကိုယ့်အပေါ်ပိုချစ်လာလိမ့်မယ် လို့ ထင်ရင် မှားသွားပါလိမ့်မယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အချစ်ရေးမှာ တစ်ဖက်သတ်တည်း အမြဲပေးဆပ်လေ အဲ့ဒီအချစ်ရးက ပိုဆိုးလေ ဖြစ်လို့ပါ။ အဲ့လိုဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကတော့ ဒီလိုရှိပါတယ်။ (၁) နားလည်ပေးလွန်းတဲ့အခါ တာဝန်တစ်ခုလို ဖြစ်လာတယ် ကိုယ်ကချစ်လို့ အလိုက်သိနားလည်ပေးတာက တစ်ခါကနေ နှစ်ခါ၊ သုံးခါ စသဖြင့် များလာတဲ့အခါ ကိုယ်နားလည်ပေးတာက …
သင့္ခ်စ္သူက သင့္ကို အရမး္လြမး္ေနမွန္း သိႏိုင္မယ့္ ထူးထူးျခားျခား လကၡဏာ (၃) မ်ိဳး
သင့္ခ်စ္သူက သင့္ကို အရမ္းလြမ္းေနမွန္း သိႏိုင္မယ့္ ထူးထူးျခားျခား လကၡဏာ (၃) မ်ိဳး အခ်စ္မွာ ထူးဆန္းတဲ့ ေမွာ္စြမ္းအင္ ရွိတယ္လို႔ လူတစ္ခ်ိဳ႕က ေျပာၾကပါတယ္။ ခ်စ္တဲ့စိတ္နဲ႔ တစ္စုံတစ္ေယာက္က ကိုယ့္ကို လြမ္းတဲ့အခါ သူတို႔ကိုယ္တိုင္က ဖြင့္မေျပာရင္ေတာင္ သဘာဝတရားႀကီးက သူတို႔အစား ေျပာေပးတတ္ပါတယ္… လူတစ္ေယာက္က သင့္ကို ဖြင့္မေျပာပဲ တိတ္တိတ္ေလး အရမ္းလြမ္းေနတယ္ ဆိုတာကို သိႏိုင္မယ့္ လကၡဏာေတြကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္… (၁) အိပ္မက္ မက္တယ္ အိပ္မက္ဆိုတာ စိတ္ဝိညာဥ္မွာ ျဖစ္ေနတဲ့ အရာတစ္ခုပါ တစ္စုံတစ္ေယာက္ရဲ႕အေၾကာင္းကို မေျပာမိ၊ မေတြးမိေပမယ့္ အိပ္မက္ထဲမွာ သူ႔ကို ေတြ႕တယ္ဆိုရင္ေတာ့ သင့္ကို သူ အရမ္းလြမ္းၿပီး သတိရေနလို႔ပါ… သင့္အေၾကာင္းကို …
ချစ်သူများကြား ပိုမိုခိုင်မြဲစေရန် ပြောသင့်သော စကားလေးမျိုး
ချစ်သူများကြား ပိုမိုခိုင်မြဲစေရန် ပြောသင့်သော စကားလေးမျိုး ချစ်သူများကြားမှာ သက်တမ်း ကြာလာသည်နှင့် အမျှ တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး သွေးမအေးသွားအောင် မေးခွန်းတွေမေးဖို့ မေ့နေတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီတစ်ခါမှာတော့ ချစ်သူ နှစ်ဦးကြားမှာ မေးသင့်တဲ့ မေးခွန်းတွေကို ပြောပြသွားမှာပါ။ ၁. အနာဂတ်မှာ နှစ်ယောက်အတူ ပူးပေါင်းပြီး ဘယ်လိုစီးပွားရေး မျိုး လုပ်ကိုင်ကြမလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကတော့ ချစ်သူနှစ်ဦးကြားမှာ ပိုပြီး ရှေ့ဆက်ခရီး ကို အတူတကွ ပူးပေါင်းမည် ဆိုတဲ့ အတွေးကို ထင်ဟပ်စေတာကြောင့် မေးသင့်တာပါ။ ၂. မေးခွန်းကတော့ ငယ်ငယ်က စကားပုံတစ်ခုနဲ့ ဆက်စပ်နေပါတယ်။ အစားကောင်း အသောက်ကောင်းစားရင် ကိုယ်ချစ်တဲ့ သူကို သတိရကြတယ်ဆိုတဲ့ အတိုင်း …
ဆံပင်အရှည်နဲ့ ကောင်မလေးတွေကို ကောင်လေးတွေ ပိုပြီး မြတ်နိုးရတဲ့ အကြောင်းအရင်း
ဆံပင်အရှည်နဲ့ ကောင်မလေးတွေကို ကောင်လေးတွေ ပိုပြီး မြတ်နိုးရတဲ့ အကြောင်းအရင်း ချစ်သူရဲ့ ဆံနွယ်အရှည်တွေဟာ ကိုကိုပုရိသတို့ အတွက်တော့ စိတ်ကူးယဉ် ပန်းခင်းကြီးပါပဲ ချစ်သူရဲ့ ဆံနွယ်အရှည်တွေဟာ အမျိုးသားတွေ အတွက်တော့ လဲလျောင်းချင်စရာ နူးညံ့လွန်းတဲ့ ကတ္တီပါကောဇော တစ်ခုပါပဲ။ ကိုယ့်ချစ်သူရဲ့ဆံနွယ်ရှည်တွေကို ကိုကိုတို့ဟာ ကာယကံရှင် တွေထက် တောင် ပိုပြီး သည်းသည်း လှုပ်တတ်ကြပါသေးတယ်။ ဆံပင်ဆိုတာ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ဒုတိယမျက်နှာပြင်ပါ လှပလွန်း တဲ့ ကေသာတွေဟာ အမျိုးသားတွေရဲ့အချစ်ကို ဆွဲဆောင်ဖို့ 80% လုံလောက်ပါတယ်။ ကိုယ့်ချစ်သူက ကိုယ့်ထက် ကိုယ့်ရဲ့ဆံပင်ကို ပိုပြီး ချစ်နေတယ် ဆိုရင် ပျိုမေတို့အနေနဲ့ စိတ်မဆိုးပါနဲ့။ ဒါဟာ ပျိုမေတို့ကို ချစ်လို့ ပျိုမေတို့နဲ့ …
မိန်းကလေးတွေ အသည်းကွဲပြီးရင်ပိုလှလာရတဲ့ အကြောင်းအရင်း
မိန်းကလေးတွေ အသည်းကွဲပြီးရင်ပိုလှလာရတဲ့ အကြောင်းအရင်း အသည်းကွဲခဲ့ဖူးတဲ့ မိန်းကလေး တော်တော်များများကို သတိထား ကြည့်မယ်ဆိုရင် အသည်း ကွဲပြီးရင် အရင်ကထက် ပိုလှလာတာကို တွေ့ရမှာပါ။ ဥပမာ ပြရမယ်ဆိုရင် JB နဲ့ ပြတ်ပြီးနောက် Selena Gomez ပိုလှ လာတာမျိုးပါ။ တစ်ချို့ ဆိုရင် အသည်းကွဲပြီး နောက်ပိုင်းမှာ သိသိသာသာကြီးကို ကိုယ်အလေးချိန် ကျ၊ ဝိတ်ကျသွားပြီး အရမ်းကို လှလာကြတာပါ။ တကယ်တော့ ဒါဟာ ထင်ကြေး မဟုတ်ပါဘူး။ လေ့လာမှု တစ်ခုမှာကိုက အမျိုးသမီး (၇၇)ရာခိုင်နှုန်းဟာ အသည်းကွဲပြီးရင် ကိုယ်အလေးချိန် သိသိသာသာ ကျသွားတယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။ (၁) စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကြိုပြင်ဆင်ထားလို့” မိန်းကလေးတွေဟာ အကြာကြီးလက်တွဲလာတဲ့ …
ချစ်သူက ဂရုမစိုက်ဘူးဆိုရင် မိန်းကလေးတွေ လုပ်တတ်ကြတဲ့ အချက် (၅)ချက်
ချစ်သူက ဂရုမစိုက်ဘူးဆိုရင် မိန်းကလေးတွေ လုပ်တတ်ကြတဲ့ အချက် (၅)ချက် မိန်းကလေးဆိုတာ ဘယ်လောက်ပဲ စိတ်ဓာတ် ကြံ့ခိုင်နေပါစေ၊ ကိုယ်ချစ်တဲ့ သူတွေရဲ့ ဂရုစိုက်မှုကို လိုချင်ကြတာ ချည်းပါပဲ။ ကိုယ့်ချစ်သူက ဂရုမစိုက်ဘူးဆိုရင် အလွန်ကို ဝမ်းနည်း ရတတ်ပါတယ်။ ဒါတင် မကသေးပါဘူး၊ နောက်ဆက်တွဲ ဒီလိုအရာတွေ ဖြစ်လာပါတော့တယ် ။ (၁) သူကိုယ့်ကိုယ် မချစ်တော့ဘူးလို့ ထင်လာတယ် တချို့ ယောကျာ်းလေးတွေက ချစ်သူဖြစ်တာ ကြာလာရင် အရင်ကလောက် ဂရုမစိုက်တတ်တော့သလို၊ ဂရုစိုက်ဖို့လည်း သိပ်မလိုဘူး၊ ငါတို့ နှစ်ယောက်က ပြတ်တော့မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ အတွေး ရှိတတ်ကြပါတယ်။ မိန်းကလေးတွေကတော့ ဂရုမစိုက်တော့ တာဟာ မချစ်တော့တာပဲလို့ သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ ဒီတော့ …